बुटवललाई नै केन्द्र मानेर व्यवसाय विस्तार गर्ने – Dainik Lumbini
बुटवललाई नै केन्द्र मानेर व्यवसाय विस्तार गर्ने
साना उद्यम प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा शाइन बैंकको लगानी
बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले साना उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै आम्दानी बढाउने गरी कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिएको जनाएको छ । ११ वर्षअघि स्थापना भएको बैंकले किसानदेखि ठूला व्यवसायसम्म लगानी गर्दै आर्थिक विकासमा केही हिस्सा सहयोग गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । जसका लागि ब्याजदरमा समेत सहुलियतलाई बढी ध्यान दिएको छ ।
विकास बैंकमा नेपालकै पहिलो नम्बरमा रहेका शाइन रेसुंगा धेरै सूचकमा लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रणी रहेको छ । बैंकले बुटवललाई नै केन्द्रमा राखेर देशभर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ । साधारणसभाले मर्जर र प्राप्तीलाई अनुमति दिए पनि ती कुराहरू प्राथमिकतामा नपार्ने र सेवालाई नै पहिलो सर्तका रूपमा काम गर्ने बैंकको योजना रहेको छ ।
बैंकले १२ औं वर्ष प्रवेशको अवसर पार्दै बुटवलको कालिकानगरमा नवनिर्मित भवनबाट सेवाप्रवाह सुरु गरेको छ । नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाहको अवसरमा बैंकले समुदायको हितभन्दा बाहिर नजाने र समुदायले खोजे जस्तो बैंकको रूपमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकले आफूलाई समुदायले खोजे जस्तो बैंकको रूपमा अगाडि बढाउने जनाएको छ । करिब १२ वर्ष अघि स्थापना भएको बैंकले समुदायको भावना र चाहानाअनुसार अगाडि बढाउँदै आएको बताएको छ
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले समुदायले खोजे जस्तो बैंकको रूपमा लैजाने बताए । बैंकका अध्यक्ष थानेश्वर पौडेलले १२ वर्षअघि ६ करोड पूँजीबाट सुरु गरिएको बैंकको चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ४० करोड र जगेडा कोष ७२ करोड गरी चार अर्ब १२ करोड पुगेको जानकारी दिए ।
बैंकमा हाल ३३ अर्ब १२ करोड निक्षेप रहेको र ३० अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह गरिएको तथा चार लाख २३ हजार ग्राहक रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम १५ लाखसम्मका उद्यम, व्यापार व्यावसाय कर्जाअन्तर्गत तीन सय चार जना ऋणीलाई रु. २४ करोड पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरेको जनाएको छ । त्यस्तै महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा ६ जना ऋणीलाई रु. चार करोड १९ लाख तीन प्रतिशत ब्याज दरमा विशेष पुनरकर्जा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार बैंकको काठमाडौंमा दुई वटासहित देशभर ७८ वटा शाखा कार्यालय र तीन वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर रहेका छन् ।
अध्यक्ष पौडेलले बैंकले कूल कर्जाको २४.६९ प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा र १०.९९ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेको जानकारी दिए ।
बैंकले यसअघि अनुमति लिँदा लुम्बिनीका तीन जिल्लालाई कारोबार र शाखा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गुल्मीको रेसुंगा विकास बैंक, प्यूठानको गौमुखी विकास बैंक, भैरहवाको पूणर््िाामा विकास बैंक र नेपालगञ्जको भार्गव विकास बैंकलाई मर्ज गरी राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी बंैकमा २ सय ७२ महिला र ३ सय ३५ जना महिला गरी ६ सय ७ कर्मचारी तथा १ सय ६७ जना सुरक्षागार्ड गरी ७ सय ७४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।